Kukho iibhotile zeglasi kwilizwe lam ukusukela kumaxesha amandulo. Kwixesha elidlulileyo, izangqa zemfundo zazikholelwa ukuba iiglasiware zazinqabile kumaxesha amandulo, ke kufanelekile ukuba ibe yeyabanini kwaye isetyenziswe ziiklasi ezimbalwa ezilawulayo. Nangona kunjalo, uphononongo lwamva nje lukholelwa ukuba iiglasi zakudala akunzima ukuvelisa ...
Ingaba uyazi? Zininzi iintlobo zeebhotile zeglasi
ngomphathi ku 20-06-28
Iimpawu kunye neentlobo zeebhotile zeglasi: iibhotile zeglasi zezona zikhongozeli ziphambili zokupakisha zokutya, amayeza kunye neekhemikhali. Banokuzinza okuhle kwemichiza; Kulula ukutywina, ukuqina komoya kunye nokungafihli nto, kwaye imixholo inokujongwa ngaphandle; ukugcina kakuhle ...
Inkqubo yemveliso yeebhotile zeglasi ikakhulu kubandakanya: material izinto zangaphambi kokulungiswa. Sityumza izinto ezimbaxa ezisisiseko (isanti ye-quartz, isoda ash, ilitye lekalika, ifeldspar, njl. ② Ukulungiselela ...